Posted by ONA Admin	/ January 23, 2014
Wararkii naga soo gaadhay Xarunta dhexe ee JWXO ayaa ka xogwaramay dagaalo dhowr ah oo ciidamada cadawga lagu naafeeyay. Dagaaladan oo kamid ah kuwa ciida Ogadenia lagu xoraynayo ayaa cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh. Bakhtiga cadawga inta la hubsaday ayaa kor u dhaafay 40 askari oo darajooyin kala duwan lahaa, meesha dhaaca uu kor u dhaafay intaa. Cadawga ayaa inta badan si dhaqsa leh u qaata bakhtigiisa, taasoo keenta in dagaala badan aan la ogaanin faahfaahinta khasaaraha cadawga soo gaadha.
Waxaa kaloo lagaga gubay baabuur kuwa ciidanka qaada ah oo halkaasi ku basbeelay isaga iyo wixii saarnaaba. Dagaaladaa ayaa u dhacay sidan;
28/12/13 Gudhis oo dagmada Dhuxun katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya kudhaxmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
28/12/13 Golxul oo Dhuxun katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxaa soogalay ciidan uu gumaysigu leeyahay waxaana halkaa lagaga dilay 10 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
2/1/14 Jalawadhi oo dagmada Xamaro ee gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
4/1/14 Hiinsaraarka oo Dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan weerar qorshaysan oo ay CWXO kuqaadeen ciidan uu cadawgu leeyahay oo halkaas kusugnaa waxaa cadawga lagaga dilay 13 askari tiro kale oo aad ubadana waa laga dhaawacay.
5/1/14 Mandooga Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/1/14 Dabala oo Sagag katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 1 qaar kalana waa lagu dhaawacay.
6/1/14 Biyomaal oo Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
6/1/14 Dabala oo Dagmada Sagag katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
5/1/14 Higlaalebiir oo Dhanaan katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
7/1/14 Miirdanbas oo Wardheer katirsan weerar xoogan oo ay CWXO kuqaadeen kolonyo baabuur ah oo halkaas maraysay waxaa ciidamka cadawga lagaga gubay 1 baabuur oo ay isla dhalaaleen isaga iyo wixii saaraaba sidoo kale waxay wax yeelo xoogan ugaysteen baabuur kale oo kolonyada kamid ahaa.
8/1/14 Qolqoldheer oo Shaygoosh katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
8/1/14 Dhagxbuur wuxuu dagaal kudhaxmaray labo ciidan oo kuwa cadawga ah waxayna iska dileen 1 askari oo waxay shaaliqe ha ugu yeedhaan ah
17/1/14 Malkadadhagaxbuur oo Dagmada Shaygoosh ee Gobolka !oraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 3 askari tiro kalana waa lagaga dhaawacay.
21/1/14 Karinbilcile oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay inta lahubo 4 askari.
21/1/14 Dabtuur oo dagmada Haarcad ee Gobolka Qoraxay katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen ciidamada cadawga oo deegaankaas kusugnaa waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin isla taariikhdaas dagaal kale oo Dabtuur kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.